प्रहरी भागेको होइन, गस्तीमा गएको हो
२०७६ जेठ २१ मंगलबार १३:०९:००
आइतबार राति नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका लडाकुले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–३ छेस्कामस्थित प्रहरी चौकी कब्जाको प्रयास गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । भोलिपल्ट बिहानै प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट त्यसतर्फ गयो । आइतबार राति स्थानीयले हतियारसहित प्रहरी चौकीतर्फ गइरहेको विप्लव समूहलाई देखेपछि प्रहरीलाई सुरक्षित रहन खबर गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो । तर, प्रहरीले भने चौकी कब्जाको प्रयासमा सत्यता नभएको दाबी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानी।
सोलुखुम्बुमा प्रहरी चौकीमाथि विप्लव समूहले आक्रमणको प्रयास भन्ने खबर सार्वजनिक भयो । प्रहरीले होइन भनेको छ, यसको आधार के हो ?
हरेक चिजका आधार अर्थात् ‘इन्डिकेटर’ हुन्छन् । कुनै चिजको प्रयास भयो भने त्यसको आधार चाहियो । चौकी आक्रमणलाई लिने हो भने भने पनि कि त्यहाँ फायर खोलिएको हुनुपर्यो, कि विस्फोट गराएको व आगजनी देखिनुपर्यो । अथवा तोडफोड गरेको हुुनुर्यो । यी कुनै कुरा नभएको अवस्थामा चौकी कब्जा वा आक्रमण कसरी भन्न र लेख्न मिल्छ ? यसले गर्दा आक्रमणको प्रयास भएको भन्ने हामी मान्दैनौं ।
प्रहरी चौकी नै छाडेर भागे, बिहानमात्रै फर्किए भन्ने छ नि ?
अहिले पहाडी जिल्लाका सबै ठाउँमा प्रहरीलाई आ–आफ्नो एरियामा अधिकतम गस्ती निकाल्ने, ब्यारेक बस्नेभन्दा बाहिर घुम्ने, शान्ति सुरक्षालाई मजबुत गर्ने स्पष्ट निर्देशन नेतृत्वको छ । यस्तो घुम्ने वा गस्ती गर्ने क्रममा कहिँ जनशक्ति कम पर्यो वा सुरक्षा थ्रेट महसुस भयो भने तपाईंहरु मद्दत माग्नुस् भनेका छौं । सबै ठाउँमा प्रहरीको ‘मोबिलिटी’ बढेको छ । यसलाई प्रहरीले चौकी छाड्यो भनेर व्याख्या गर्न उचित हुँदैन ।
एकजना प्रहरी पनि चौकीमा नबसेर चौकी छाड्नु त सुरक्षाको हिसाबले पनि गम्भीर कुरा होइन र ?
पहाडी दुर्गम इलाकामा प्रहरी भवनको अवस्था निकै जीर्ण र कहिँ केही राख्न नमिल्ले अवस्थाको पनि छ । त्यसले गर्दा प्रहरीले कुरेर बस्नुपर्ने हुँदैन । त्यहाँ कुनै हात–हतियार पनि छैन । जनशक्ति भन्दा बढी हतियार स्टोरेज पनि हुँदैन । त्यसैले जनतालाई शान्तिसुरक्षामा आश्वस्त पार्न र संख्या पनि देखाउन प्रहरी गस्तीमा जान सक्छ । गस्ती जाँदैमा किन गयो त भनेर चर्चा गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
सबै कुरा सामान्य भए एकाएक काठमाडौंबाट सेनाको हेलिकप्टरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली किन खटाउनुपरेको त ?
प्रहरी माग भएको ठाउँमा पठाउने हाम्रो रणनीति नै हो । नियमित शान्तिसुरक्षामा खटिने प्रहरीले विशेष अभियान, सर्च अभियान वा लामो दूरीको पेट्रोल गर्नुपर्ने अवस्थामा भइरहेको जनशक्तिले नपुग्ने घडीमा प्रहरी पठाउँछौं । सोलुमा प्रहरी हिजो गयो, त्योभन्दा पहिले नै पठाउने योजना थियो । हिजो त्यो हल्ला आउनु र प्रहरी जानुले त्यो कुरा उठेको संयोगबाहेक अरु केही होइन ।
हेलिकप्टरमा प्रहरी पठाएकाले बढी चर्चा भएजस्तो लाग्यो । किनभने हामी स्थायी रुपमा प्रहरी दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं । बाटोमै प्रहरी आउन–जान समय खर्चिने भयो भने त्यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले कुनै स्थानमा जनशक्ति बढाउनुपर्यो, सर्च अभियान सुरु गर्नुपर्यो वा असुरक्षा भयो भनेर पहाडी जिल्लाले माग्यो भने तत्काल पठाउने र काम सकेर फिर्ता बोलाउने गरेका हौं । शान्ति सुरक्षाको दायित्व सशस्त्र प्रहरीको पनि भएकाले संयुक्त रुपमा टोली पठाएका हौं ।
प्रदेशबाटै पनि त प्रहरी टोली पठाउन सकिन्थ्यो नि ?
अहिले नेपाल प्रहरीको जनशक्ति सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले कम छ । यस्तोमा प्रदेश प्रहरीले सबै जिल्ला हेरिरहेको अवस्थामा माग पूरा गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हेडक्वार्टरबाट पठाउँछौं । पठाउँदै आएका पनि छौं ।
त्यसो भए सोलुखुम्बुमा विप्लव समूहको कुनै प्रकारको गतिविधि थिएन, जसले शान्ति सुरक्षामा असर गरोस् ?
सुरक्षामा असर गरेको छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्नुपर्यो । शंकाको आधारमा सुरक्षासँग जोडिएको कुराको अनावश्यक चर्चा गर्न भएन ।
प्रहरीकै अधिकारीले चौकी सार्यौं, आक्रमणको सम्भावना थियो भनेर अनौपचारिक रुपमा किन भनेका त ?
जुन अधिकारीले भनेको हो, उहाँले नाम किन लुकाउनुपर्यो ? कुन स्रोतका आधारमा भनेका हुन्, उहाँलाई नै सोध्नुस् ।
विप्लव समूहको शंकास्पद गतिविधि सोलुखुम्बुमा देखिएको सूचना प्रहरीसँग थियो कि थिएन ?
भोजपुरमा केही समयअघि भिडन्त भयो । भिडन्तमा एकजना विप्लव समूहका कार्यकर्ता मारिए । यसले पहाडी जिल्लामा अलिकति प्रहरी परिचालन बढाएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन खोजेको हो । त्यही अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
विप्लव समूहले प्रहरीमाथि आक्रमणको सम्भावना आकलन प्रहरीले गरेको छ ?
एउटा प्रतिबन्धित समूह बाहिर रहेको अवस्थामा हामीले सुरक्षाको विषयमा अली बढी सम्वेदनशील त बन्नैपर्छ ।
काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा पनि केही समयअघि विस्फोट भए । यस्तोमा नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने ?
शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठिक छ छैन, इन्डिकेटरकै आधारमा भन्ने हो । शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम छ । जनताले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र इमान्दारीतामा विश्वास गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने क्रममा आफूलाई बलिदान दिन जहिले पनि तयार रहन्छ । त्यसैले विश्वास गर्नुपर्यो । यो हुनसक्छ भनेर परिकल्पना गर्नुभन्दा पनि केही सूचना वा संकेत भए नेपाल प्रहरीलाई सूचना दिएर सहयोग गर्नुहोस् ।
विप्लव समूहविरुद्ध ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अपरेसन सुरु गरिएको हो, सोलुखुम्बुमा ?
‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अभियानका रुपमा चलाएका त छैनौं । तर शान्तिसुरक्षामा असर गर्ने काम जुनसुकै समूह वा व्यक्तिबाट भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनी दायरमा ल्याउने कुरामा प्रहरी रत्तिभर डगमगाउँदैन । कानुन कार्यान्वयनमा निर्दयीपूर्वक उत्रिन्छौं ।